अल्लाह बाइबल परमेश्वरको मुस्लिम पंथ मा पन
तिनीहरूले अल्लाह मात्र परमेश्वर हुनुहुन्छ र भन्ने बाइबलीय परमेश्वरको होइन भनेर त स्वीकार। तर समकालीन स्वीडिश अनुवाद मा अल्लाह "परमेश्वरको" रूपमा अनुवाद गर्दा विकृत भएको छ।
यो प्रश्न, म पनि एउटा छोटो जवाफ दिन प्रश्न पृष्ठ ।
तपाईं अल्लाह र मसीही Triune परमेश्वरले नै परमेश्वरको एउटा भिडियो भने। इस्लाम र क्रिस्चियन धर्म दुवै यहूदी मा आधारित गर्दा र सबै यहूदी अगमवक्ताहरूले मुसलमान कुरान छन् यो कसरी हुन सक्छ?
बाइबल परमेश्वरको अल्लाह भनिन्छ छैन। आफ्नो नाम YHWH - परमप्रभु। यो नाम पनि येशूको छ।
रोमी 10: 9। यदि तपाईं येशू हो भनेर आफ्नो मुखले स्वीकार लागि प्रभु र परमेश्वर मरेका उहाँलाई उठाएको आफ्नो हृदयमा विश्वास, तपाईं सुरक्षित गरिनेछ।
के अल्लाह र YHWH पक्कै येशूले अल्लाह भनिन्छ कुन नै परमेश्वरको हुन।
अल्लाह छैन बाइबल परमेश्वरको मुस्लिम पंथ मा पनि प्रकट भएको छ:
"कुनै अन्य छ परमेश्वरको भन्दा अल्लाह र मुहम्मद को दूत छ अल्लाह ।"
अरबी मा "परमेश्वरको" र "अल्लाह" छ। यसलाई यसरी परमेश्वरले परमेश्वरको होइन भनेर प्रकट जो विभिन्न शब्द, छ। तिनीहरूले अल्लाह मात्र परमेश्वर हुनुहुन्छ र भन्ने बाइबलीय परमेश्वरको होइन भनेर त स्वीकार। तर समकालीन स्वीडिश अनुवाद मा अल्लाह "परमेश्वरको" रूपमा अनुवाद गर्दा विकृत भएको छ। पश्चिमी हामी सोचाइ मा भ्रमित गरिनेछ कारण शायद मसीही परमेश्वरको मामला छ।
तर "अल्लाह" त्यो भन्नाले "सबैभन्दा ठूलो देवता" तर शब्द बाइबलीय परमेश्वरको मतलब गलत समझ बैठी हुँदैन उचित नाम हो। त्यहाँ Mecca मा 300 मूर्तिहरू थिए। यी को, अल्लाह मुहम्मद को सबैभन्दा ठूलो देवता बाहिर छानिएको र एक परमेश्वरको यो गरे।
भगवान एक छोरा छ
बाइबल परमेश्वरको जो यो पुरानो नियमको र नयाँ नियममा दुवै मा धेरै पटक भन्छन् एक छोरा, छ।
शब्द 30: 4th जो स्वर्गमा र फेरि तल आएको छ? कसले आफ्नो हात मा हावा जम्मा गरेको छ? कसले लुगा मा पानी बाध्य छ? कसले पृथ्वीको सबै सीमा स्थापित गरेको छ? आफ्नो नाम के हो, र आफ्नो छोरा के हो - तपाईं पाठ्यक्रम थाहा?
मा 11: 1st जब इस्राएल बालक थियो मैले त्यसलाई प्यारो र बाहिर मिश्र म मेरो छोरा भनिन्छ।
2 शमूएल 7: 14.Jag आफ्नो बुबा हुनेछ, र उहाँले मेरो छोरा हुनेछ। उहाँले iniquity प्रतिबद्ध भने, म, फलामको डण्डाले उहाँलाई chasten हुनेछ भनेर सामान्यतया, र मानिसहरूको छोराछोरीको धर्काहरू मानिसहरूलाई।
भजन 2:7म प्रभुको निर्णय घोषणा हुनेछ। उहाँले मलाई भन्नुभयो: "मेरो छोरा, हो यो दिन म प्यारो तिमीलाई।"
भजनमा 89: 27 उहाँले मलाई रुन पर्छ, 'तपाईं मेरो पिता, हो मेरो परमेश्वर र मेरो उद्धारको "!
मर्कूस 1: 1। यो येशू परमेश्वरका पुत्र, सुसमाचारको को शुरुवात हो।
लूका 1:35। स्वर्गदूतले जवाफ दिए र उनको भन्नुभयो जब, पवित्र आत्मा तिमीहरूमा आउनेछ, र सबैभन्दा उच्च तपाईं overshadow हुनेछ; त्यसैले, पनि तपाईं पैदा हुनेछ जो पवित्र परमेश्वरको पुत्र भनिन्छ।
एफिसी 4:13। हामी सबै, विश्वास एकता र परमेश्वरको पुत्रको ज्ञानको प्राप्त सिद्ध मानिस, र ख्रीष्टको पूर्णतामा पर्छ कि परिपक्वता को डिग्री गर्न सम्म।
हिब्रू 4:14। हामी आकाश मार्फत पारित गरेको छ जो ठूलो पूजाहारी हुनाले, येशूले परमेश्वरको पुत्र, हाम्रो स्वीकार छिटो पकड गरौं।
येशू आफैले परमेश्वरको छोरा हुनुहुन्छ भनेर भन्छन्
यूहन्ना 3:18। जसले उहाँलाई विश्वास छैन निन्दा गरिएको छ, तर जसले परमेश्वरको मात्र छोरा विश्वास छ किनभने पहिले नै दोषी खडा विश्वास गर्दैन।
जन 5:25। Verily, verily, म तिमीहरूलाई, एक समय आउँछ, र यो पहिले नै यहाँ परमेश्वरको आवाज सुन्न पर्छ मरेका गर्दा हो भन्न; र बस्नेछन् सुन्न गर्नेहरूलाई।
जन 9:35। येशूले तिनीहरूले उहाँलाई बाहिर हालियो थियो सुने, र उहाँलाई फेला गर्दा उहाँले उसलाई भन्नुभयो: के तपाईं परमेश्वरको पुत्र विश्वास?
जन 10:36। त तपाईं जसलाई पिताले पवित्र पार्नु भएकोछ, र संसारमा पठाएको उहाँलाई भन्छन्: किनभने म भने, तपाईं निन्दा, म परमेश्वरको पुत्र हुँ।
भगवान (पिता) उहाँले एक छोरा छ भन्छन्
मत्ती 3:17। र हेर, स्वर्गमा एउटा आवाज, यो मेरो प्रिय पुत्रलाई छ भन्नुभयो। उहाँलाई म एक राम्रो इच्छा छ।
मत्ती 17: 5th उहाँले अझै पनि बोल्ने बेला, हेर, यो एक चमकीले बादल ती द्वारा overshadowed थियो, र लो, बादल देखि आवाज भने, यो मेरो प्रिय छोरा, म राम्रो इच्छा हुँ जसलाई छ। उहाँलाई सुन्न।
1:11 चिनो। र एक आवाज स्वर्गबाट ​​आए: तपाईं, मेरो प्यारो पुत्र हुनुहुन्छ जसलाई म खुसी राम्रो छु।
मर्कूस 9:7यो मेरो प्रिय पुत्रलाई छ: र बादलले तिनीहरूलाई overshadowed र क्लाउड देखि भने आवाज आएको आए। उहाँलाई सुन्न!
अल्लाह कुनै छोरा छ
तर कुरान मा अल्लाह कुनै छोरा छ कि स्पष्ट भन्छन्।
अल्लाह आफूलाई एक छोरा छैन गरे, न त त्यहाँ उहाँलाई छेउमा कुनै पनि अन्य देवता छ; त्यस अवस्थामा प्रत्येक भगवान उहाँले सृष्टि गर्नुभएको थियो के अँगाले थियो, र केही निश्चित अरूलाई भन्दा डोमिनियन बढाउनका प्रयास थियो। (कुरान 23:29)
"अनि यहूदीहरूले भन्छन्," एज्रा परमेश्वरको छोरा छ "र ख्रीष्टियनहरूले भन्छन्:" ख्रीष्ट परमेश्वरको छोरा हुनुहुन्छ। "त्यहाँ एक उनको मुख संग भन्दै छ, तिनीहरूले sägelserna अघि disbelieved गर्नेहरूलाई देखि, तिनीहरूले सत्य टाढा deluded कसरी अनुकरण गर्छन्। परमेश्वरको श्राप तिनीहरूलाई हुन!" (कुरान 9:30)
"अनि तिनीहरूले (मसीहीहरू र यहूदीहरू) यसो भन्छन्:। परमेश्वरको छोरा छ महिमा हुन उहाँ (सबै माथि तिनीहरूले उहाँलाई संगत कि) उहाँलाई जे आकाश र पृथ्वी मा छ पर्छ होइन, गर्न, र सबै आत्मसमर्पण। आज्ञाकारी (उपासनामा) उहाँलाई। " (कुरान 2: 116)
"छैन गर्न (उहाँको Majesty) परमेश्वरको उहाँले एक छोरा प्राप्त गर्ने थियो महिमा (र तिनीहरूले उहाँलाई संगत के माथि उहाँले हुन उच्च) उहाँले कुरा decrees गर्दा उहाँले मात्र भन्छन्।।" हुनुहोस्! "- र यो । " (कुरान 19:35)
त्यहाँ यसरी दुई फरक देवताहरूको हुनेछ। तिनीहरूलाई को एक छोरा, अन्य छैन।
परमेश्वरले आफ्ना पुत्रलाई संसारमा पठाउनुभयो
बाइबल परमेश्वरको दुनिया सुरक्षित र आफूलाई यसलाई मिलाप गर्न आफ्नो एक मात्र छोरा पठाउनुभयो भन्छन्।
यूहन्ना 3:16। परमेश्वरको लागि त त्यो ऊमाथि विश्वास नष्ट हुँदैन तर अनन्त जीवन छ, केवल छोरा प्यारो आफ्नो दिनुभएको संसारमा प्रेम गर्नुभयो।
2 कोरिन्थी 5:19। परमेश्वरको लागि ख्रीष्ट आफैले संसारमा मिलाप गराउन थियो, र तिनीहरूलाई आफ्नो पाप गणना गरेनन्, र उहाँले हामीलाई मेलमिलाप वचन प्रतिबद्ध छ।
उहाँले कुनै छोरा छ किनभने कुरान अल्लाह संसारको एउटा छोरा पठाइएको छैन।
परमप्रभुले - - त्यहाँ कुरान कुनै reconciler छ किनभने तसर्थ, त्यहाँ अल्लाह कुनै मुक्ति त्यहाँ YHWH को हो जस्तो छ।
यसबाहेक, कुरान येशूले बाइबल वर्णन र पुष्टि के भन्दा अर्को। यी सम्पूर्ण दुई फरक मानिसहरू हुन्। को कुरान को "येशू" बाइबल येशूको बारेमा भन्छ विरुद्ध पूर्ण जान्छ।
"अनि (सम्झना) येशूले मरियम को छोरा, यसो भन्नुभयो:" इस्राएलका ओह बच्चाहरु! म मेरो अघि टोरा (आए जो) पुष्टि र जसको नाम अहमद हुनेछ, मेरो पछि आउन तपाईं एक दूत को खुसी tidings दिने, तपाईं परमेश्वरको दूत हुँ। "तर उहाँले (मोहम्मद अहमद) आउँदा स्पष्ट प्रमाणहरू तिनीहरूलाई, तिनीहरूले यसो भने: "यो मात्र जादू छ" (कुरान 61: 6)
यो आफूलाई विरुद्ध पूर्ण "येशू" को कुरान को छ जो नै येशूले हुनेछ। मात्र आफूलाई contradicts, तर उहाँले इनकार।
येशूले पहिलो र अन्तिम छ
1: 8। म अल्फा र ओमेगा, शुरुवात र अन्त हुँ, थियो र आउन, सर्वशक्तिमान छ जो छ र कसले प्रभु, भन्छन्।
बाइबल अनुसार छैन बौरिउठ्नुभएको येशूले शुरुवात र अन्त्य हो भन्छन् किनभने, परमेश्वर, वा दूत को दूत मुहम्मद छ। अल्फा र ओमेगा ग्रीक वर्णमाला को पहिलो र अन्तिम पत्र हो। अर्को शब्दमा, येशूले पहिलो र अन्तिम छ। कुनै एक येशूको अघि आउँछ र कुनै एक येशूको पछि आउनेछ। मुहम्मद येशूले पछि वर्ष सयौं आए। यसरी यो मुहम्मद एक झूटा अगमवक्ता हो भनेर प्रमाणित गर्छ।
Vecka 24, torsdag 17 juni 2021 kl. 03:21